8 × 36 I-Podcast: Kwiveki enye ukuya kwi-WWDC 2017 | Ndisuka mac
Kwaye kuncinci okuseleyo kwi-WWDC, ngakumbi kwiintsuku ezi-5, kucacile ukuba sikhona Bonke abasebenzisi beApple abalinde lo Mvulo umhla we-5 ukuba bafike (Nangona kunzima ukuthi silinde uMvulo) ukubona iindaba kwisoftware kwaye mhlawumbi ezinye izixhobo ezinokuthi zisiboniswe yiApple kwinkomfa yabo yabaphuhlisi.
Kwi-podcast yangokuhlwa sibonile ezinye zeenkcukacha ezinokuthi zisizise kwiApple kwiinkqubo zayo, zombini kwi-iOS, njengakwiMacOS, iwOSOS kunye neTVV. Ngamafutshane, imalunga nokubetha ngamehlo okanye ukubuza ukuba sifuna ukuphucula ntoni kwezi nkqubo kuba akukho ukuvuza okuninzi xa sithetha ngesoftware ka-Apple kwaye Kunzima ukwazi ukuba bangasothusa ngantoni.
Las ukuphuculwa kweSiri, iMeyile kunye nezinye izicelo zeApple Kuya kufuneka ibe yenye yezona zinto zibalulekileyo zasemva kwemini yangoMvulo. Ngamafutshane, asikholelwa ukuba iApple isungule utshintsho kubuhle kwiinkqubo zayo kuba akukho mfuneko nayo, uninzi lusebenza kakuhle kwaye lupolishe iinkcukacha yile nto luyichukumisayo kwezi nguqulelo zangoku. Ewe, ukuba bongeza imisebenzi emitsha okanye baphucule kuyo, baya kwamkelwa kakuhle, ke siyakumema ukuba umamele ipodcast kwaye wabelane noluvo lwakho kuthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-8 × 36 I-Podcast: Iveki enye ukuya kwi-WWDC 2017